मेवाको पातको जूसले बचाउँछ ज्यानै जाने रोगबाट !
Home/ Health & Living/मेवाको पातको जूसले बचाउँछ ज्यानै जाने रोगबाट !
स्वास्थ्य /शिक्षा । मेवा खानुले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । तर, मेवाको पातको जूस विरलै कसैले पिएको सुनिन्छ । मेवाको पातको जूस यदी तपाईले पिउनु भएको छ भने राम्रो हो र यदी पिउनु भएको छैन् भने अब पिउन थाल्नुस् । किनकी मेवा खानुको साथै मेवाको पातको जूसले धेरै प्रकारका रोगहरुबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।
उसो त डेङ्गु र चिकनगुनियाका रोगिहरुलाईं मेवाको पातको जूस पिउन सल्लाह दिन्छन् । तर, यदी तपाई जीवनभर स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नियमित डाइटमा मेवाको जूसलाई सहभागि गराउन सक्नु हुन्छ ।
जानौँ, मेवाको पातको जूस पीउनुको फाइद।
७४ वर्षे वृद्धको संघर्ष: जसले घामपानी नभनी एक्लै २ वर्षसम्म निरन्तर बाटो खनिरहे (भिडियो)
बाबाको माया लाग्छ, औसधि किन्ने पैसा छैन मलाई अरु जस्तै स्कुल जान मन लाग्छ ! (मार्मिक भिडियो हेर्नुस )
बिवाहपछि महिलाको शरीरमा आउँछन् यस्ता १० परिवर्तन
यी ८ रोग लागे सरकारले सित्तैमा उपचार गरिदिन्छ, हेर्नुस कुन कुन रोग